Mpidoroka aho - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Adaladala aho
Sarotra amiko ny miaiky hoe mahazo aina aho. Nandainga tamin'ny tenako sy ny manodidina ahy nandritra ny fiainako aho. Amin'izany fomba izany, nahita karazana fiankinan-doha maro izay miankina amin'ny zavatra maro aho toy ny alikaola, kôkainina, heroin, marijuana, sigara, Facebook ary zava-mahadomelina maro hafa. Soa ihany fa afaka niatrika ny fahamarinana aho indray andro. Lasa fiankinan-doha aho. Mila fanampiana aho!
Ny valin'ny fiankinan-doha dia mitovy amin'ny olona rehetra no voalazako. Ny toe-batanao sy ny fiainanao dia miharatsy. Potika tanteraka ny fifandraisan'ny fiankinan-doha. Ilay hany namana sisa tavela ho an'ny fiankinan-doha, raha afaka miantso azy ireo ianao dia mpivarotra zava-mahadomelina na mpamatsy toaka. Ny sasany amin'ny fiankinan-doha dia manandevo tanteraka an'ireo mpivarotra zava-mahadomelina amin'ny alàlan'ny fivarotan-tena, heloka bevava ary hetsika tsy ara-dalàna hafa. Ohatra, nijangajanga i Thandeka (Niova ny anarana) ho an'ny sakafo sy ny zava-mahadomelina amin'ny sakafany mandra-pahatongan'ny olona namonjy azy tamin'ity fiainana mahatsiravina ity Ny fisainan'ny olona manandevo koa dia tratra. Ny sasany dia manomboka manavaka, mahita ary maheno zavatra tsy misy. Ny fiainana zava-mahadomelina no hany zava-dehibe aminy. Izy ireo dia tena manomboka mino ny tsy famoizany ary miresaka amin'ny tenany, tsara ny zava-mahadomelina ary tokony ho ara-dalàna avokoa mba hahafahan'ny tsirairay mifaly azy.
Ny olona rehetra fantatro izay nanao azy tamin'ny fiankinan-doha dia mahatsiaro ny maha-izy azy sy ny fiankinan-doha ary mahita olona manenina azy ireo ary hitondra azy ireo avy hatrany avy any amin'ny zon'ny zava-mahadomelina mankany amin'ny foiben'ny fanavaozana. Nihaona tamin'ny olona izay nihazona tobim-pitsaboana ho an'ny fiankinan-doha aho. Maro amin'izy ireo no mpidoroka. Izy ireo no voalohany nanaiky fa na dia aorian'ny 10 taona tsy misy zava-mahadomelina dia maharitra ady isan'andro ny mitoetra madio.
Ny karazana fiankinan-doha
Nanomboka tamin'ny razambeko ny fiankinan-doha. Nisy olona nilaza tamin'izy ireo hihinana avy amin'ny zavamaniry manokana satria hampahay hendry izy ireo. Tsia. Saingy nisy zavatra mitovy aminy ho azy. Niankina tamin'ny fifandraisany tamin'ny rainy izy ireo ary nino ny lainga. Rehefa avy nihinana ity zavamaniry ity ny vatany dia nanjary fianiana. Nahazo ny fiankinan-doha tamin'izy ireo aho.
Aleo hotantaraiko aminao ny fomba nahalalako ny fiankinan-doha. Rehefa avy nahatakatra izy fa izy dia fiankinan-doha dia nanomboka nanoratra taratasy ho an'ny rahalahiny sy anabaviny ny apostoly Paoly. Ny mpidoroka zava-mahadomelina dia antsoina hoe alikaola, ny hafa ho junkies, crackers na dopera. Ireo izay fiankinan-doha dia antsoina hoe mpanota.
Tao amin'ny iray nosoratany dia nilaza i Paoly hoe: "Koa toy ny nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalàn'ny olona iray sy ny ota tamin'ny ota, dia nandratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra» (Romana 5,12). Takatr'i Paoly fa mpanota izy. Noho ny fiankinan-doha dia ny fahotany dia sahirana izy namono ny rahalahiny ary nampiditra am-ponja ny hafa. Manimba ny fiainany izy (manota) fihetsika izay noheveriny fa manao zavatra tsara. Sahala amin'ireo mpanafika rehetra dia mila olona hampiseho azy fa mila fanampiana izy. Indray andro raha nandeha hamono olona tany Damaskosy izy, dia nifanena tamin'ilay lehilahy Jesosy (Asan’ny Apostoly 9,1: 5). Ny asan'ny androm-piainany manontolo dia ny fandefasana ireo mpaka fiankinana tahaka ahy amin'ny fiankinan-doha amin'ny ota. Tonga tao amin'ny tranon'ny ota izy mba hitondra antsika hivoaka. Tahaka ilay lehilahy nanatona ny mpivarotra mba hanala an'i Thandeka amin'ny fivarotan-tena, dia tonga izy ary niara-nanota tamintsika mba hanampiany antsika.
Raiso ny fanampian'i Jesosy
Mampalahelo fa tamin'ny fotoana niainan'i Jesosy tao an-tranon'ny ota, dia nisy ny nieritreritra fa tsy mila ny fanampiany izy ireo. Hoy i Jesosy: "tsy tonga hiantso ny marina aho; tonga hiantso mpanota aho hibebaka" (Lioka 5,32 Fandikana ny Genève vaovao). Tonga saina i Paoly. Tsapany fa nila fanampiana izy. Mahery be ny fiankinan-doha nataony ka na te te hiala aza izy dia nanao ihany koa izay nataony. Nitaraina tamin'ny taratasiny ny iray ao amin'ny taratasiny: "Satria tsy fantatro izay ataoko. Satria tsy manao izay tiako aho; manao izay halako aho" (Romana 7,15). Tahaka ny ankamaroan'ny mpidoroka, dia nahatakatra i Paul fa tsy afaka manampy azy io izy Na teo am-panavaozana azy aza izy (ny sasany amin'ny mpanota no miantso azy hoe fiangonana), ny fiankinan-doha dia mbola nahery tokoa ka afaka nanala azy. Tsapany fa zava-dehibe tamin'i Jesosy ny manampy azy hamarana izany fiainana izany.
"Fa mahita lalàna hafa ao an-tranoko izay mifanohitra amin'ny lalàna ao an-tsaiko aho ary mitazona ahy ho voafandrin'ny lalàn'ny ota izay ato an-tanako. Olona tsy mety aho! Iza no hanafaka ahy amin'ity vatan'ny fahafatesana ity? Isaorana anie Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika! Koa ankehitriny, manompo ao an-tsaina ny lalàn'Andriamanitra aho, fa amin'ny lalàn'ny ota » (Romana 7,23-25).
Toy ny rongony, voaniho, na maherifon, ity zava-mahadomelina mpanota ity dia mampiankin-doha. Raha nahita toaka na mpisotro zava-mahadomelina ianao, dia ho hitanao fa tena fiankinan-doha izy ireo ary manandevo azy. Very ny fifehezana ny tenanao. Raha tsy misy olona manome fanampiana azy ireo ary tsy tsapan'izy ireo fa mila fanampiana izy ireo, dia hanimba azy ireo ny fiankinan-doha. Rehefa nanolotra fanampiana ho an'ireo mpanafika sasany toa ahy i Jesosy dia nisy ny nihevitra fa tsy andevo na inona na inona izy ireo.
Hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: «Raha mitandrina ny teniko ianareo, dia ho mpianatro marina ary ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo. Ary hoy ny navalin'izy ireo azy: Taranak'i Abrahama izahay ary tsy mbola nanompo azy akory. Ahoana no ilazanao hoe: Tokony ho afaka ianao? » (Jaona 8,31: 33)
Ny mpifoka rongony dia andevozin'ny zava-mahadomelina. Tsy manana fahafahana intsony izy hanapa-kevitra raha handray zava-mahadomelina na tsia. Toy izany koa amin'ny mpanota. Nimenomenona i Paoly fa fantany fa tsy tokony hanota, fa nanao izay tsy tiany hatao. Namaly azy ireo i Jesosy ary niteny hoe: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay manota dia andevon'ny ota." (Jaona 8,34).
Jesosy dia tonga olombelona nanafaka ny olona tamin'io fanandevozana ny ota io. "Navahan'i Kristy ho afaka amin'ny fahalalahana isika! Koa miorena tsara ary aza avela ho mafy fehezina intsony ny tenanao!" (Galatiana 5,1 Fandikan-teny Vaovao any Genève) Jereo fa rehefa teraka i Jesosy dia tonga hanova ny maha-olombelona antsika mba tsy hanota intsony. Niaina tsy nanota izy ary tsy tonga mpanompo intsony. Manome ny "olombelona tsy misy ota" izy amin'ny olona rehetra maimaim-poana. Izany no vaovao tsara.
Fantaro ny fiankinan-doha
Tokony ho 25 taona lasa izay, dia nahatsapa aho fa zatra amin'ny ota. Nahatsapa aho fa mpanota. Tsapako toa an'i Paul fa mila fanampiana aho. Nisy ireo mpisava lalana naharary nilaza tamiko fa misy ivontoerana fanarenana tao. Nilaza tamiko izy ireo fa raha tonga aho dia afaka mahazo famporisihana ireo izay nanandrana namela ny fiainany tamin'ny ota koa. Nanomboka nanatrika ny fivorian'izy ireo aho ny alahady. Tsy mora izany. Mbola manota ombieny ombieny aho fa nolazain'i Jesoa aho hifantoka amin'ny fiainany. Nalaiko ny fiainako mpanota ary nataony azy ho azy ary nomeny ny fiainako tsy manota.
Miaina ny fiainana iainako ankehitriny noho ny fitokisako amin'i Jesosy. Ity no tsiambaratelon'i Paoly. Hoy izy nanoratra: "Voahombo miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, fa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay miaina ankehitriny amin'ny nofo aho, dia mino ny Zanak'Andriamanitra, izay tia ahy sy ho an'ny tenany. nanolo-tena tamiko " (Galatiana 2,20).
Tsapako fa tsy manana fanantenana intsony aho amin'ity vatana ity. Mila fiainana vaovao aho. Maty teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy Kristy aho ary niaraka tamin'ny fitsanganako tamin'ny maty dia nitsangana tamin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Fanahy Masina aho ary lasa namorona vaovao. Amin’ny farany anefa dia omeny vatana vaovao namboarina ahy izay tsy andevoziny intsony hanota intsony. Niaina tamin'ny fiainany manontolo tsy nisy fahotana.
Hitanao ny marina, Jesosy efa nanafaka anao. Ny fahalalana ny fahamarinana no manafaka. "Ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anao" (Jaona 8,32). Jesosy no fahamarinana sy fiainana! Tsy mila manao na inona na inona ianao mba hanampiany anao Jesosy. Raha ny marina dia maty ho ahy izy fony mbola mpanota. "Satria fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa, ka tsy misy hireharehan'ny olona. Fa asany isika ary noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra mialoha. tokony handehanantsika eo » (Efesiana 2,8: 10).
Fantatro fa be dia be ny olona manambany ny mpifaninana ary mitsara azy ireo mihitsy aza. Tsy nanao izany i Jesosy. Nilaza izy fa tonga hamonjy ny mpanota izy, fa tsy hitsara azy ireo. "Satria Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany" (Jaona 3,17).
Raiso ny fanomezana Krismasy
Raha tratry ny fiankinan-doha ianao, dia ny ota, mety ho hainao sy hahafantatra fa tia anao manokana amin'ny alalàn'ny fiankinan-doha Andriamanitra. Ny dingana voalohany amin'ny fanarenana dia ny mamela ny fahaleovantenanao voafidy amin'Andriamanitra ary hiankina tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy dia mameno ny fahafaha-manaonao sy ny tsy fahampiana, izay nofenoinao zavatra hafa ho solon'izay. Mameno izany amin'ny tenany amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izy. Ny fiankinan-doha tanteraka amin'i Jesoa no mahatonga azy ireo mahaleo tena tanteraka amin'ny zavatra hafa rehetra!
Hoy ny anjely: "Hiteraka zazalahy i Maria, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, satria Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany" (Matio 1,21). Izao ilay Mesia izay mitondra famonjena izay notadiavina nandritra ny taonjato maro. "Mpamonjy no teraka taminao anio, dia i Kristy Tompo ao an-tanànan'i Davida" (Lioka 2,11). Ny fanomezana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra ho anao manokana! Mirary krismasy